Forum serasera malagasy HAMETRAKA DATY RAIKITRA HO AN'NY TAOM-BAOVAO MALAGASY ? - Dinika forum.serasera.org
HAMETRAKA DATY RAIKITRA HO AN'NY TAOM-BAOVAO MALAGASY ?
Fitohizan'ny hafatra : HAMETRAKA DATY RAIKITRA HO AN'NY TAOM-BAOVAO MALAGASY ?
Valiny : 5
RUZ9 - 29/04/2019 10:31
Taitra ihany ny tena raha nahare fa hametraka daty iray hankalazana ny taom-baovao malagasy ny ministeran'ny kolontsaina.
Harena ny fahasamihafana, ary tsy azo terena hitovy izay tsy mitovy.
Ny vahoaka no mila beazina aloha hahalalany ny atao hoe taom-baovao ara-panandroana malagasy.
Avelao ireo tsy mitovy hevitra samy hanazava ny azy, ho azon'ny vahoaka ihany izy mety sy tsy mety any aoriana any, raha tsy izany, ho voasolo zavatra hafa tsy izy ilay kolontsaina.
Nianatra sy nandalina ny fomba malagasy sy ny hafa ny tenanay, anisan'izany ny fanandroana.
Tsy homba ny atsy aho na ny aroa.
Fa izao no hevitro.
Siansa ny fanandroana fa tsy finoana.
Ka asaivo samy hilaza an'izay zavatra hitranga amin'ity taona ity aloha ireo mpifanandrina dia ho hita eo ny tohiny. Miankina amin'ny datin'ny taom-baovao mantsy izay hitranga mandritry ny taona, miteny koa ny ora.
Fomba fanaon-dRadama io, ary tsy misy maharatsy azy, nanao toy izany koa Andrianampoinimerina.
Ireto izao holazaiko ary tsy azon'izy ireo haverina raha mpikaroka tokoa izy.
Mifarana ny 07 jiona fa tsy ny 07 mey ark'izay voasoratro teo aloha ny fahavaratra raha izay tondroin'ny kintana no arahina.
Hanomboka ny 07 desambra izao ny fahavaratra manaraka.
Tsy hahomby avokoa ny fitapitaka rehetra manomboka amin'ity taona ity, ka mila mitandrina ireo zatra manao laln-dririnina.
Tsy tokony hisy oram-pahavaratra alohan'io daty io, raha tsy hilaza fitrangana loza voajanahary.
Asio fanitsiana koa ireo sokajin'olona hasaina sao handonto an'ilay kolontsaina.
Tsidiho kely aloha ity pejy ity alohan'izay : Ny herin'ny fanahy na hasina
Ny herin'ny fanahy na hasina
Tovorandria - 29/04/2019 20:48
Minisitry ny kolontsaina tompoko dia balarora sy molotra no anananany, olona tsy competent mihitsy io vehivavy io fa miteniteny sy mampidra molotra foana izay no specialite any. Sady olon ny frantsay anie ireo mpitondra rehetra ireo koa inona no antenainao an´izay kolontsaina vanona any?,
Jereo aloha ilay Baobab ao Dubai (Ao @ tanindrazan ´i Rajoelina izay firenena ananany Villa faran´izay ngeza) , raha mbola miondrana an-tsokosoko lava ny harem pirenena izay mody arovana io nefa alefa any ivelany isa´andro d tsy hanan-kasina mihitsy ilay Madagasikara n´inon inona,
Fa maninona ny haren ny firenenana hafa ireo mandroso ireo no voaharony d maninona ny antsika no amidy ambongadiny isan ´ora ?, rehefa kelikely d andeha ho any Etats Unies ny zaza gasy hijery ny zava boaharin ´ny Tanindrazany, tena mampahonena, ary satria ny harem pirenena ahondra isak izay mihetsika, voahosihosy ny hasiny d tsy hisy fampandrosoana vanona izany eo, ny mpitondra no fitaratra ,ka raha mpitondra zanatany Frantsay ohatr´ireo tss zava banona eo
RUZ9 - 30/04/2019 10:56
Mankasitraka anao namaly, tsy hotohizako ny kihana, hitondra fanitsiana kely aho,
Ny 03 jiona izao, vao hifarana ny fahavaratra fa tsy 07 mey na 07 jiona.
Tsy isika malagasy irery no ahitana tsy fitovian-kevitra eo amin'ny resaka daty, fa misy "logiciel" mandiso kajy koa amin'ity sehatra ity.
Tsy azo tefitefena foana nefa ny daty ara-panandroana satria iankinan'ny fiainana rehetra, na ny fiainam-pirenena na ny fianan'ny tsirairay sy ny fihariany.
Ny 07 desambra vao hanomboka ny fahavaratra, tara iray volana eo ho eo raha oharina tamin'ny fiantombohan'ity fahavaratra ity.
Hitantsika amin'izany fa raha mamafy vary aloha, zatra ny daty mitovy amin'ilay teo ny tantsaha, ho be ny vary simba.
Ka izay no ilazako hoe aza maika hamaritra daty iraisana ny amin'ny datin'ny taom-baovao malagasy.
Averiko indray fa tokony hotsidihana Ity pejy ity alohan'ny hanasana ny olona handray anjara amin'izany, raha tsy maintsy hatao : Ny herin'ny fanahy na ny hasina
Ny herin'ny fanahy na ny hasina
RUZ9 - 10/05/2019 10:50
Mety hilaza daty alohan'ireo ny météo, ho fiafaran'ny fahavaratra sy ho fiantombohany amin'ity taona ity, satria raha ny éphémérides vahiny no arahina, efa gémeaux izao, nanomboka tamin'ny 05 mai teo, ary volana novambra no hanomboka ny sagitaire.
Tokony hifanaraka amin'izany koa ny antsika, saingy niampy iray volana ny fahavaratra tamin'ity taona ity, izany hoe mihemotra iray volana avokoa ny daty ara-panandroana aorian'izay.
Raha ny baiboly koa no arahina satria manandro koa ny jiosy, mbola fahavaratra ity volana ity satria fararano.
Hitanao ao amin'ny baiboly ohatra ny hoe "...Izy no mandrotsaka ny oram-pararano".
Ry zalahy mpijery ny toetr'andro moa géophysicien, izany hoe miompana bebe kokoa amin'ny astronomie fa tsy amin'ny astrologie, na mifandray aza ireo, izany hoe mety hirona amin'ny kajy vitan'ny tandrefana, satria fitaovana avy any, tsy maintsy mifanaraka amin'ny kajy sy praograma avy any.
Ity taona ity ihany moa no hafa ny antsika sy ny an'ny vahiny, fa ho hitanao fa mifarana miaraka amin'ny volana taureau hatrany ny fahavaratra ary miantomboka indray izy amin'ny fiantombohan'ny sagitaire.
Hamafisiko ihany nefa fa 03 jiona vao mifarana ny fahavaratra, tsy vokatry ny fiovaovan'ny toetr'andro io, fa raha tsy izay, dia vokatry ny fiovaovan'ny toetr'andro tokoa.
Afaka miomana ny amin'izay ho setrin'izany isika.
Averiko ihany fa tsara ny manaraka an'ity pejy ity, alohan'ny fandraisana ny fanapahan-kevitra rehetra, raha fomban-drazana sy kolontsaina no resahina : ny herin'ny fanahy na hasina
Iniako tsy ampiasaina ny voambolana malagasy tsy hilazan'ny sasany hoe manaraka ny atsy aho na ny aroa.
RUZ9 - 15/05/2019 10:45
Fahavaratra sy ririnin-dasa tsaroana
Samy mahatsiaro isika, fa efa nolazaiko mialoha fa ny 07 novambra 2018 no hiantomboka ity fahavaratra ity, ary izay koa no hitan'ny météo nony avy eo.
Efa nilaza mialoha koa ny tenako, na tsy teto aza, fa tsy hisy rivo-doza handalo eto amin'ity fahavaratra madiva ho tapitra ity fa ny tondra-drano no hisy.
Miara-mahita isika fa tsy nisy niditra teto ny rivo-doza, ary maro koa ny faritra tondra-drano natsy maro aza ny isan'ny orana latsaka.
Ny rivo-doza tamin'ny taon-dasa moa, efa nolazaiko mialoha, na tsy nosoratako aza, fa hanara-tsisiny ary hivoaka avy eo.
Nanaraka ny sisin-tany tokoa ilay rivo-doza niditra avy any amin'ny ranomasimbe indiana ary nivoaka tany amin'ny ranomasimbe indiana ihany.
Tsy maintsy avoaka ny marina, raha tsy izany, mpisoloky hatrany no hamitaka vahoaka,
Tsaroantsika koa ny Cyclone Enawo tamin'ny 2017, nampoizina tokoa ny fandalovany teto Antananarivo ny andron'ny 08 marsa.
Rehefa nasain'i RUZ9 nitony izy, tampoka tokoa ny fivoahany, ary nahita lalam-poza handehanana any Antsirabe, ary nandeha haingana namonjy ny morondranomasina nony avy eo, ary lasa, tsy nimpody.
Tsaroantsika tsara ilay horohorontany tamin'ny 2017.
Nihorohoro tokoa ny tany, ary nivonona ny handrava zavatra betsaka tokoa, saika hitatra hatrany amin'ny fipoahana volkano aza angamba izy iny, fa rehefa nasain'ny tenanay nijanona izy, nijanona.
Tsy misy afaka milaza ho tsy mahalala an'izany izay nifoha tamin'iny alina iny, na ny marenina aza, raha tsy efa vonona hanohitra fotsiny befahatany.
Ny antony hilazako an'ireo, satria voafehiko tsara ny fahalalana ara-panahy, ary Zanak'Andriamanitra , manana ny hasina ato amiko, ka tsy azo afenina ny marina, ary tsy azo lalovam-potsiny ny tena, raha raharaham-pirenena no resahina.
Mila fahamatorana izay rehetra mahakasika ny fiainam-pirenena., ka averiko eto foana ity pejy ity izay ilaina mihitsy ny mijery azy : Ny herin'ny fanahy na Hasina
RUZ9 - 22/05/2019 13:20
Hitantsika tokoa ary fa mbola fahavaratra isika izao, ireny fa nilatsaka indray ny orana ny 20 sy 21 mey 2019 teo.
Cyrius moa tsy afaka mandainga, tsy maintsy voamarina amin’ny lafiny rehetra, na ara-baiboly na ara-tsiansa, indrindra ara-kajy vao avoaka eto.
Ny olona manan-kasina tsy mamitaka, fa ny fahamarinana no heriny.
Hoy i Molière hoe : « La Vertu est le premier titre de Noblesse ».
Afa-po angamba isika, ka hoy aho hoe : raha handray fanapahan-kevitra momba ny tantara sy ny taom-baovao malagasy.
ilaina ny mitsidika an'ity pejy ity : Ny herin'ny fanahy na ny hasina
Ny herin'ny fanahy na ny hasina]Tohero izay vosaoratro ato [/url] ho an'izay sahy sedra fa hosedraintsika.
Ny tena moa efa voasedra rahateo ary mbola vonona.